जीवनशैली Archives - VoiceNp
काठमाडौं । आफ्नै विवाह समारोहमा नाच्न पनि नपाउनु ? कुनै बेहुलाले बिहे समारोहमा नाच्न नदिने र नाचेको आरोपमा थप्पड हान्ने गर्यो भने बेहुलीले के गर्लिन् ? यस्तो बेलामा विद्रोह गर्नुको साटो घुम्टोभित्र लु...
खोकी लाग्नुलाई मानिसहरु हल्का रुपमा लिने गर्छन् । कतिपय खोकीको समस्या लिएर अस्पताल पनि जाने गर्दैनन् । चिसो मौसममा खोकीको समस्या हुनुलाई सामान्य रुपमा नै लिने गरिन्छ । तर, कहिले काँही लामो समयसम्म खोक...
काठमाडौं । चलचित्रको काममै व्यस्त भइरहने अभिनेत्री ऋचा शर्माको दैनिकी आमा बनेपछि बदलिएकोे छ । केही समयअघि छोरालाई जन्म दिएकी उनी अहिले मातृत्व सुखमा रमाइरहेकी छन् । आफ्नो अधिकांश समय सुटिङ, टेलिभिजन र...
पिरो मरिचलाई खानेकुरामा एकदमै कम प्रयोग गरिन्छ। हामी कुनै विशेष खाना वा चियामा मरिचको प्रयोग गर्छौँ। यसलाई खानाका परिकारमा मात्र प्रयोग नगरी विभिन्न घरेलु औषधिका रुपमा पनि प्रयोग गरिन्छ। पेट, छाला र ह...
असन्तुलित जीवनशैलीले निन्द्रा नलाग्ने समस्या बढ्दै
काठमाडौं । मानव शरीरका लागि निदाउनु अपरिहार्य भएपनि कहिलेकाहीं निन्द्रा लाग्दैन । निदाउन अनेक प्रयास गर्दा पनि निदाउन सकिँदैन । अहिले मानिसमा निन्द्रा नलाग्ने समस्या निकै बढेको छ । निन्द्रा नलाग्नुका ...
अमलालाई अमृत फल भनिन्छ । यसको सेवन भिटामिन सी प्राप्तिको उत्तम तरिका पनि हो । तर कतिपयलाई यो कसरी खाने भन्ने सही तरिका नै थाहा छैन । जसका कारण उनीहरुलाई यसको पूरा फाइदा नै मिल्दैन । भारतकी डाइटिसियन त...
हरेक विवाहित जोडीको इच्छा आफ्नो जीवनमा खुसीयालीले भरिएको होस् र आफ्नो बालबालिका र पार्टनरसँग जीवनको हरेक पाटोलाई राम्रो तरिकाले बाँच्न सकूँ भन्ने हुन्छ । तर कतिपय अवस्थामा श्रीमान्–श्रीमती एक अर्कासँग...
काठमाडौं । कोरोना भाइरसका कारण अहिले विश्व नै आक्रान्त बनेको छ । रुघा, खोकी लाग्नु, ज्वरो आउनु र शरीर दुख्नु कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरियण्टका सामान्य लक्षण हुन् । तर, यस्तो मौसमी फ्लुका कारण पनि हुन...
हिन्दु नारीहरुमा रजस्वलालाई धार्मिक दृष्टिकोणबाट अपशकुन मानिन्छ । त्यसैले विशेष पूजा पाठ होस् वा कुनै कार्यक्रम वा यात्रामा जानुपर्ने भयो भने औषधी खाएर आफ्नो महिनावारीको समय पर सार्न धेरैलाई सही र सजि...
नयाँ खानेकुरा खाएँ भने रेसिपी सोधेर घरमा बनाएर खान्छु : राजाराम पौडेल
काठमाडौं । राजाराम पौडेल लोकप्रिय हास्य कलाकार हुन् । थुप्रै चलचित्र, टेलिसिरियल तथा कमेडी शोमा उनले आफ्नो कौशल पस्किसकेका छन् । युगदेखि युगसम्म, दक्षिणा, प्रेमपिण्ड, सेन्टी भाइरस, लक्का जवान, श्री लग...